Yaa soo diray haddiyaddii arooska ee bambada ee dishay caruuskan? - BBC News Somali
Yaa soo diray haddiyaddii arooska ee bambada ee dishay caruuskan?
Image caption Lammaanaha ayaa aqal galay 18-kii February
"Bambo aroos" oo dishay injineer dhowaan aqal galay xaaskiisana si xun u dhaawacday ayaa carqaladeysay nabadda magaalo yar oo ku taalla Hindiya. Ku dhowaad bil kaddib dhacdada, booliisku wax caddeymo ah ma helin.
'Haddiyad kedis ah'
"Tani waxay u ektahay haddiyad aroos," ayuu Soumya Sekhar u sheegay xaaskiisa. "Waxa keliya ee aanan ogeyn waa cedda soo dirtay. Cedna kama garanayo Raipur."
Saddexdooda waxay la taahayeen xanuun iyagoo dul yaalla dhulka uu dhiiggu ka buuxay. Jeemamani Sahu way gubaneysay. "I badbaadi. Waxaan u maleynayaa inaan dhimanayo," Soumya Sekhar ayaa ku taahayay kahor inta uusan miyir beelin.
Image caption Muuqaal laga duubay jikada waxyar kaddib dhacdada
"Waxaan nahay dad caadi ah oo nolol caadi ah ku nool. Ma lihi wax cadow ah. Gabadheyda malaha cadow. Wiilkaan soddogga u ahayna ma uusan lahayn cadow. Cedna kama shakisani, mana garanayo qof sidaan sameyn kara," ayuu yiri Sudam Charan Sahu, oo ah aabbaha Reema.
Image caption In ka badan 800 oo qof ayaa ka soo qayb galay arooskooda oo ka dhacay guriga Sahu
"Waxay ahayd sanadkii hore," Reema ayaa ii sheegtay. "Waxaan ku wada hadleynay telefoonka, wuxuuna yiri qof baa isoo wacaya. Waxaana xusuustaa isagoo hakad i geliyay, wuxuuna goor dambe ii sheegay, 'waxaa isoo wacay qof ii hanjabaya. Nin baa qadka ku jiray iina sheegay inaanan guursan.'"
Mar dambe ma uusan soo hadal qaadin wicitaan, markii uu guurka dhacayna, "gebi ahaanba waanu iska illownay".
Image caption Mid ka mid ah sawirradii ugu dambeeyay ee ay lammaanaha ku galeen goobta arooska
Baarayaal labo kooxood ka kooban ayaa su`aalo dilka la xiriira weydiiyay in ka badan 100 qof - oo u badan saaxiibbada iyo qaraabada lammaanaha - oo ku kala sugan afar magaalo. Waxay dib u raaceen moobaayladii lammaanaha iyo laptop-yadooda.
"Been baad ii sheegteen, runta iima aydaan sheegin," ayay ku canaanatay aabbaheed.